GORKHALI VIDEO .COM
कैलास पर्बतमा यसरि भगवान देखे पछी सबै जना चकित पुजा आज गर्नेको घुइचो भेटि सोरुप सेयर / लाईक गरेर दर्सन गर्नु होस नसोचेको ठाउबाट धन लाभ हुने छ at
पेटको बोसो घटाउने ९ घरेलु उपाय::जानकारीको लागि पुरा पढ्नु होस १. कागती पानीबाट गर्नुहोस् दिनको सुरुवात
बदाममा भिटामिन इ तथा प्रोटिनका अलावा फाइबरको मात्रा अधिक मात्रामा हुन्छ । यसको सेवनले पेट लामोसमयसम्म भरिएको अनुभूति हुन्छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा बढी भएपनि मोटाई भने बढाउँदैंन ।-स्वास्थ्य खबरपत्रिका
यो फोटोमा भाग्गेमानिले मात्र भगवान देख्नु हुनेछ यदि देख्नु भयो भने १ लाईक १ सेयर गर्रेरा दर्सन गर्नुहोस at
जाडोमा खजूर एकदमै गुणकारी ! जान्नुहोस् खजुरका ५ फाइदा::जानकारीको लागि पुरा पढ्नु होस जाडो मौसममा खजुर खाएर धेरै लाभ लिन सकिन्छ । खजूरमा पोषक तत्वहरुको भण्डार हुन्छ । खजूरमा आइरन, मिनरल, क्याल्सियम, अमीनो एसिड, फस्फोरस र भिटामिन्स प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । एउटा खजूरबाट २३ क्यालोरी प्राप्त गर्न सकिन्छ । जान्नुहोस्, खजूरका निम्न ५ फाइदा:
हड्डीलाई बलियो बनाउँछ – खजूरमा पाइने ‘साल्ट’ले हड्डीहरुलाई बलियो बनाउछ । यस्तै, यसमा पाइने क्यालसियम, सेलेनियम, म्यागनीज र कपरको मात्राले पनि बलियो बनाउँछ ।
रोग प्रतिरक्षा शक्ति – खजूरको सेवनले तपाईको प्रतिरक्षा शक्तिलाई बढाउँछ । यसमा ग्लूकोज र फ्रूक्टोजको मात्रा बढी पाइन्छ, फलस्वरुप तपाईको रोग प्रतिरक्षा शक्ति पनि बढ्छ ।
छालाको लागि फाइदाजनक – खजूरले छालालाई पनि फाइदा पुर्याउँछ । खजूर खानाले अनुहारमा चमक र निखारता आउँछ ।
वजन बढाउँछ – यदि तपाईको वजन कम छ भने खजूर जरुर खाने गर्नुहोस् । यसले तपाईको वजनलाई सन्तुलिन रुपले बढाउँन मद्दत गर्दछ । यसका लागि दैनिक चारदेखि पाँच वटा खजूरका दाना नियमित खाने गर्नुपर्छ ।
तुरुन्त ऊर्जा दिन्छ – यदि तपाईलाई थकाई महशसु भएको बेला खजूर खानु भएमा तुरुन्तै शरीरमा ऊर्जा भरिएर आउँछ । खजूरमा ग्लूकोज, फ्रक्टोल र सुक्रोज आदि तत्व पाइन्छ ।
मानब स्वास्थका लागि महका फाइदाहरु::जानकारीको लागि पुरा पढ्नु होस काठमाडौँ । महमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन बी र सी, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, सोडियमजस्ता तत्व पाइन्छन्, जुन शरीरका लागि ज्यादै लाभदायक हुन्छन् ।
मानब स्वास्थका लागि लाभदायक महका फाइदाहरु:
16 Really Kind-Hearted Celebrities. Number 8 Will Surprise You
Doha, Qatar: Finally You HaveaReason To Quit Your Full-Time Job
Doha, Qatar: Check Out The Easiest Way Of Making Money Online
महमा ग्लुकोज पाइन्छ । महमा पाइने भिटामिन र सुगर शरीरभित्र पसेपछि छिट्टै घुल्छन् र अन्य मिष्टान्न परिकारले जस्तो नराम्रो परिणाम देखाउँदैन ।
सुक्खा खोकी लागेको बेला कागतीको रसमा मह मिसाई खाने गर्नाले आराम मिल्छ । कागतीको रस छैन भने महमात्रै खाँदा पनि खोकी लाग्ने क्रम तत्काल घट्न जान्छ ।
कब्जियतको समस्या छ भने गोलभेँडा अथवा सुन्तलाको रसमा एक चम्चा मह मिसाएर खाने गर्नाले कब्जियत ठीक हुँदै जान्छ ।
दुब्लाएर हैरान हुनुहुन्छ र मोटाउन खोजिरहनुभएको छ भने राति दूधमा मह हालेर पिउने गर्नाले मोटाइन्छ ।
शरीरका मांसपेशी बलियो बनाउन, रक्तचापलाई नर्मल राख्न, रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउन पनि मह खाने गरिन्छ ।
जीउ आलस्य भइरहने, हाई आइरहने गर्छ भने तपाईंलाई रक्तअल्पता भएको हुनसक्छ । मह खानाले यस्तो समस्या हटेर जान्छ ।
शरीरको वजन घटाउन चाहनुहुन्छ भने बिहान मनतातो पानीमा कागतीको रस र मह हालेर नियमित खाने गर्नुपर्छ । बिहान महपानी खानाले दिउँसो कम भोक लाग्छ, जसले गर्दा वजन बढ्न पाउँदैन ।
हाडजोर्नी दुख्ने, जाडोमा जीउ कटकटी खाने गर्छ भने महमा दालचिनीको पाउडर मिसाएर दुःखेको ठाउँमा मसाज गर्नाले आराम हुन्छ ।
रुघाखोकी लागेको छ, हाच्छिउँ आइरहेको छ भने मह, अदुवा र तुलसीको पातको रस बराबर मात्रामा मिसाएर खाने गर्नाले आराम हुन्छ ।
राति राम्रोसँग निद्रा लाग्दैन भने सुत्नुअघि दुई चम्चा मह खाने गर्नाले निद्रा लाग्छ ।
गर्भवतीले मह खाने गर्नाले पेटमा भएको बच्चा शारीरिक र मानसिक रूपमा बढी स्वस्थ हुन्छ ।
दिनहुँ मह खाने गर्नाले दिमाग तेजिलो बन्दै जान्छ ।
महलाई अनारको रससँग मिसाएर खानाले मानसिक समस्या, सुस्तता, निराशा र मानसिक थकान क्रमशः कम हुँदै जान्छन् ।
सुन्दरताका लागि पनि मह लाभदायक हुन्छ । आँखावरिपरि डार्क सर्कल छ अथवा आँखा वरिपरिको भाग सुनिएजस्तो देखिएको छ भने मह र बदामको तेल बराबर मात्रामा मिसाई आँखा वरिपरिको छालामा सुत्ने बेलामा दल्ने र बिहान उठेर धुने गर्नुपर्छ ।
अनुहार, छाती आदिमा चाउरी देखापर्न थालेको छ भने पाकेको आधा एभोकाडोमा एक चम्चा मह मिएर चाउरी परेको ठाउँमा दली २० मिनेटपछि धुने गर्नाले चाउरी हराउँदै जान्छ ।
नियमित दाह्री काट्दा छाला खस्रो भएको अथवा दाग देखापरेको छ भने दाह्री काटेपछि त्यस्तो ठाउँमा मह दलेर १५ मिनेटपछि पखाल्ने गर्नुपर्छ ।
सातामा एकपटक नरिवलको तेलमा मह बराबर मात्रामा मिसाई कपालको जरासम्म पुग्ने गरी मसाज गरी २० मिनेटपछि कपाल धुने गर्नाले कपाल चम्किलो बन्छ ।
कालो चिया पिउनुका फाइदाहरु::जानकारीको लागि पुरा पढ्नु होस कठमाडौं । कालो चिया संसारभर नै उपभोग हुन्छ । कसैले चिनीजन्य गुलियो पदार्थ हालेर पिउने चलन छ भने कसैले केही पनि नहाली सादा रुपमै पिउँछन् ।
नेपालमा प्राय मानिसहरुले चिनी राखेर कालो चिया पिउने गर्छन् । केहीले भने अदुवा, कागती, तुल्सी राखेर चिया पिउँछन् ।
अमेरिकास्थित बोस्टन स्कुल अफ मेडिसिनका अनुसार कालो चियाले रक्तनलीमा हुने अवरोधलाई सामान्य बनाउँछ, जसका कारण स्ट्रोक हुने खतरा पनि कम हुन्छ ।
८ वर्ष लामो अध्ययन पछि क्यान्सर विरुद्ध फल पत्ता लाग्यो
सहदेव चौधरी । मिडिया एनपी। काठमाडौं। यदि तपाई आफ्नो मोबाइल हराएर एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुस किनकी तपाईको हराएको मोबाइ...
जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ) तपाईं संक्रमित बन्न र केही आवश्यकता समय आफ्नो जीवन ruining सुरु गर्न र तिनीहरूले उत्पादन कि toxins कारण हो रूपमा ती परजीवी यस्तो तत्काल रोग ...
कसरी बन्छ सर्पले टोकेको औषधि ? आज थाहा पाउनु होस
काठमाडौँ, १६ असोज । समयमै औषधोपचार नपाउँदा नेपालमा बर्सेनि सयौँ मानिसले सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यस्तो समस्या विशेषगरी तरा...
सुगर रोगबाट मुक्त पाउन सबैभन्दा अचुक ओखती बेल :: जानकारीका लागि पुरा पढ्नुहोस् काठमाडौं । यदि तपाई मधुमेह पीडित हुनुहुन्छ भने अब आत्तिनु पर्दैन । तपाईले घरेलु उपायहरू अपनाएर नै आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्नु हु...
यो फोटोमा भाग्गेमानिले मात्र भगवान देख्नु हुनेछ यदि देख्नु भयो भने १ लाईक १ सेयर गर्रेरा दर्सन गर्नुहोस ग्यास्ट्रिकबाट पिडित हुनु हुन्छ ? ल अब यस्तो मात्र गर्नुस सबै चट्टै हुने तरिकाहरु काठमाडौँ । पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्यालाई नै ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने...
मुला खानुहोस्!!! एक महिनामै तपाइको पायल्स ठिक पार्नुस!!!!
एजेन्सी । पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुन...